raha tsy misy ny mety ho fiovana mahery vaika sy zavatra tsy ampoizina ato anatin’ny tapa-bolana. Betsaka ny zavatra toa somary mahatsikaiky sy mampihomehy ato anatin’ity tantara ity, indrindra fa ny zavatra resahin’ny kandida izay hahafahan’ny Malagasy ihany koa mitsara ny fahamatoran’izy ireo. Ny hirariana dia mba hizotra araka ny tokony ho izy sy hangarahara ity fifidianana ity. Asa lahy na niverina ho tanora fanahy indray ilay nilaza ho efa nihamatotra roa volana lasa izay, fa dia mandeha hatrany ny fampanantenana paradisa ho an-dRamalagasy e ! Niaiky tamin’izany fa tsy mitovy intsony, hono, izy tamin’ny taona 2009 sy amin’izao fotoana izao. Tsy efa naman’ny manaiky ve izany fa fanahin-jaza no toetra nentina nitantana ny firenena taorian’ny fandravana, fandrobana, fandorana,… ary nangorona harem-pirenena araka izay tratry ny saina sy ny hery, ka tsy atao mahagaga raha mena ny tondro rehetra tao anatin’izany, ary potika ny fiainam-bahoaka. Izao indray izany, dia miteny fa nilatsahan’ny fanahy masina sy efa niova, fa tsy toy ny taloha intsony ? Tanana zatra mitsotra io e ! Niala tamin’ny hala-tahaka tamin’ny tenin’ilay iray nohenjehina fahiny, dia namorona fampanofinofisana tahaka ny natao 8 taona lasa izay, dia toa miteniteny foana izany, toy ny hoe: Hanisy toeram-piantsonan’ny fiara, hono, eo an-tokotanin’ny sekoly fanabeazana fototra na ny EPP e ! Hanome fiara afaka mananika tendrombohitra sy mandeha amin’ny rano e ! Asa lahy na lany bala sy lany abobo, ka izay hitsin’ny vava sisa. Hisy fiantraikany amin’ny fiainam-bahoaka na ny any anaty vilaniny ve izany ? Efa azo hifampitsarana ny nafitsoka teo, ary tsy adala ny Ntaolo raha nilaza hoe: “ny tanana zatra mitsotra tsy afaka hivokona intsony” ary mbola hampiantsika aza hoe: “Ny vava efa zatra mandainga, tsy afaka hikombona intsony”. Anjarantsika no manokatra ny mason-tsaina sy ny masom-panahy e !